Usuku My Pet » 5 Amathiphu Yokwenza Great First Online Dating Impression
5 Amathiphu Yokwenza Great First Online Dating Impression
Igcine ukubuyekezwa: uJan. 21 2021 | 3 imiz ufunde
Uma abantu ukukhuluma ngamawala, ngokushesha ukucabanga ubuso nobuso contact. Nokho, Izikhathi sezishintshile, futhi ngamawala futhi ngokuphawulekayo daba contact online ... ikakhulukazi uma kuziwa endabeni yokuqomisana online. Futhi, imithetho ubuso nobuso ngamawala ihluke ukuphola online ngamawala.
Where Impression Your First Counts: Iphrofayela yakho futhi imeyili Yakho
Uma ukhetha ukuphola online phezu nezindlela ezivamile of dating, into yokuqala kufanele uqaphele yilapho okutholile lokuqala uya kunendaba. Futhi, okutholile zokuqala iyokwenziwa sitholakala kokubili profile yakho futhi imeyili.
Uma kuziwa Profile Yakho:
Uma ungenalo useyazazi, profile yakho kufanele ibe eyakhayo futhi ukuziqinisa nokuba nombono - lutho ebonisa ukuthi ungumuntu unesizungu noma awukhululekile (ezinkulu turn-off for abesifazane). You futhi ufuna ukuqinisekisa ukuthi ihlala wamanje, kanjalo ubuyekeze ngokuvamile uma udinga ukuba (noma lapho izinto ziye zashintsha empilweni yakho). Qinisekisa wena achazayo ngezinhlobo izinto othanda ukuyenza ngaphandle kokunikeza ukwaziswa kakhulu yesokunene nelulwane. Khumbula, ufuna ukubamba isithakazelo sabo uma imeyili emuva naphambili.
Uma kuziwa imeyili Yakho:
Manje, uma uhlela on Email a "usuku" abangahle, udinga ukwazi ukuthi ukuze ubhale killer kuqala imeyili impression. Lokho-imeyili lokuqala oyithumelayo kumele ibe nemfudumalo futhi simema; ufuna ukuba sibonise umamukeli ukuthi ungumuntu ezithakazelisayo futhi kufanele ukukwazi. Ngakho, lokho ukuthi email isinyathelo kuqala kufanele kufake hlangana?
1 - Imeyili Your Ukubingelela
Uma uthola profile of umuntu oyithandayo bese unquma ufuna imeyili, udinga ukwazi ukuthi yini okufanele bayisho ukwenza okuvelayo kokuqala. Kufanele uqale imeyili off okulandelayo, "Sawubona noma kusihlwa noma Sawubona (lomsebenzisi)". Qiniseka ukuthi lomsebenzisi lomuntu lipelwe lafakwa - ukubhala phansi uma kufanele. Lolu hlobo of wokuvula athole njengoba afudumele futhi ukahle.
2 - A Brief Communication
Uma kuziwa ukubhala ephelele lokuqala imeyili isinyathelo, nanku tip kudingeka sigcine engqondweni: lutho ngaphezu izigaba ezintathu futhi lutho izigaba esingaphansi ezimbili. Anything dlala iDemo noma abajwayelekile ngeke kukusize izimpendulo, futhi yini eside khulu kusho uzama basibona ngokuphelelwa yithemba.
3 - Thola Ground Common
Uma ebheka profile abo, Akungabazeki wena babefana kangaka asho in the imeyili. Uma kungokuthile kuxaka ukuthi nobabili share in common, ukubatshela ngakho. Nakuba abantu abaningi ngeke uhlole iphrofayela yakho emva kokuba uthole i-imeyili kusuka kuwe (futhi yebo, profile yakho kufanele isho ozithandayo ukuzilibazisa), akufanele njalo ukubala kulesi.
4 - Detail Ukuphathwa Profile-Specific
Manje wena ofunde phezu profile abo ngokucophelela, ngakho lapho uqala ngokubhala imeyili yakho, ukubalula okuthile ngakho. Cabanga ukhuluma endaweni ethile uke waba noma movie babone, njll. futhi kuyoba okwakhayo ngesihloko. Kubalulekile ukuthi basibona umuntu emihle uma ufuna ukuba aphendule.
5 - Buza One (Just One) Umbuzo Direct
Kungcono ukubuza umbuzo owodwa nje ngqo ukuze uthole impendulo emuva. Too imibuzo eminingi kungenziwa waqonda njengoba kokugxambukela ezindabeni zabantu. Qiniseka umbuzo uwukuthi into abazi ninake ekuphenduleni.
Kubalulekile ukhumbule ukuthi ukudala umbono wokuqala, kokubili profile yakho kanye imeyili kudingeka babheke ngokumema - hamba phezu kwabo bobabili nge izinyo ikamu esihle, ngifuna sipelingi kanye neluhlelo lwelulwimi amaphutha. Thembeka e bobabili, futhi uma ubhala ukuthi imeyili kokuqala, unamathela ulwazi jikelele - oyikho nokuthambekela, iminyaka yakho, uma uke ngishadile, babe izingane, njll.
Esiqala First akuzona nje ubuso nobuso contact kusaba; uqamba liyasetshenziswa online. Ngokuhlela kusengaphambili, ungakha umqondo wokuqala ukuthi uthola izimpendulo oyifunayo.
Behamba ngemoto isilwane sakho